Voadika ny 30 Novambra 2018 2:42 GMT
Fitsidihan'i Bush: Tamin'ny 20 Desambra, nitsidika an'i Shina i George W. Bush, filohan'i Etazonia, ay nihaona tamin'ireo Sinoa mpitarika, niresaka mikasika ny olana toy ny fahalalahan'ny ara-barotra sy ny finoana. Namoaka lahatsoratra tao amin'ny blaoginy mikasika an'i Bush izay nomeny lohateny hoe ”Ny Tanana Feno Volo an'i Bush” (amin'ny teny ZH) ny mpanao gazety Sinoa iray izay nandray anjara tamin'ilay fetibe fandraisana tao amin'ny fiangonana iray ary nandika ilay lahatsoratra ny ESWN. Namerina nanadihady ity fitsidihana ity ihany koa i Danwei ary nanao bango tokana mikasika ireo tantara avy amin'ny haino aman-jery ofisialy.
Sarintany Podcast: Nametraka sarintanin'ny podcaster Sinoa tamin'ny alalan'ny fitaovana Google Maps API ny Podlook, ilay tranonkala lehibe indrindra ho an'ny lahatahirin'ny podcast (tapaka ny rohy) ao Shina. Raha toa ka mpanao podcast ianao, mba manorata anarana ho an'ny firotsahana ho mpikambana ao amin'ilay tranonkala ary avy eo afaka manolotra ny toerana misy anao ianao mba hahafahan'ny rehetra mahita hoe aiza ianao. Ary koa, an-dàlana ny fifaninanana antsoina hoe ”Ny Podcast Sinoa Tsara Indrindra ny taona 2005”. Ny Desambra no manomboka ny fifidianana azy ireo.
Fanambadian'ny Tontolon'ny Blaogy: Nitatitra i Welleway (amin'ny teny ZH) fa nahita fa hivady ny blaogera roa taorian'ny nihaonany sy nahababo ny andaniny sy ny ankilany tao amin'ny MSN Space. Tao anatin'ilay fanasana, nanasa ireo hafa mba handray anjara amin'ity antsoina hoe ”Lanonanan'ny Fanambadian'ny tontolon'ny Blaogy” ity ilay lehilahy mpampakatra.
Mpandresy Tamin'ny Loka DW Weblaog: Ny ”Otra mampiasa ronono” no mpandresy tamin'ilay Fanaovana gazety am-blaogy Sinoa tsara indrindra, blaogy nosoratan'ny mpanao gazety malaza Wangxiaofeng. Mampifangaro ny esoeso sy ny fampialàna voly ny ankamaroan'ny fiangaly fanoratany.
Torohevitra Blaogera: Manoratra andiana lahatsoratra torohevitra amin'ny fiainana (amin'ny teny ZH) i Webleon ankehitriny, mampianatra ny fomba fampiasana ilay tolotra fampiantranoana blaogy Blogger, vokarin'ny Google. Na izany aza, mbola voasakana ao Shina any amin'ny faritra maro ao Shina foana ny sehatra Blogspot-ny.